San Htun's Diary: ခံစားရတယ်. အတွေးလေးတွေ
စန်းထွန်းအတွက်တော. မိဘညီအကိုမောင်နှမသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း ဆိုတာ ဘဝရဲ. အရေးပါတယ်.၊ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတွေပါ။ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် အပြစ်မမြင်တယ်.၊ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် ချစ်နေတယ်.၊ ကိုယ်.ဖက်မှာ အမြဲရှိနေတယ်.၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြတ်သားစေတယ်.၊ စိတ်ဓာတ်တွေကို ခိုင်မာစေတယ်.၊ အစားကောင်းကောင်းစားရရင် ကိုယ်.ကို သတိရနေတယ်.၊ ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ အမြဲဖြစ်ပေါ်စေတယ်.၊ ကိုယ်.စိတ်ဓာတ်တွေ အမြဲမြှင့်တင်ပေးနေတယ်. မိသားစုလေးပါ။
ကိုယ်ဘယ်ရောက်ရောက် ပြန်ချင်မိတယ်.၊ ကိုယ်လိုအပ်တာတွေ အမြဲဖြည်.ပေးနေတယ်.၊ ချစ်ခြင်:မြစ်တာတွေ ထုံမွှန်:နေတယ်. ကိုယ်.ရဲ. အိမ်။
ရင်ဖက်ချင်းနီးတယ်. သူငယ်ချင်းကတော. မတူညီတယ်. ပတ်ဝန်:ကျင်၊အသိုင်းအဝိုင်း၊အကျင့်စရိုက်တွေကြားက တူညီတယ်. စိတ်ဓာတ်တွေနဲ.မိသာ:စု၊သူငယ်ချင်း၊အချစ်၊စီးပွါးရေး၊မိတ်ဆွေ၊အတွေးအခေါ်၊အယူအဆ၊စိတ်ကူးယဉ် မျှော်လင့်ချက် အရာအားလုံး တို.တွေ ဖလှယ်ခဲ.တယ်။ ကိုယ်.ခံစားရတာတွေ တလုံးမကျန် ပြောပြနိုင်တယ်။ တို.တွေကြားမှာ အထင်အမြင်သေးတာ၊ ရှုံ.ချတာ၊မနာလိုတာ၊ရန်ဖြစ်တာတွေ မရှိဘဲ ရိုသေလေးစားမှု၊ချစ်ခင်မူ၊နာ:လည်မူ၊အနစ်နာခံမူ၊သည်းခံမူတွေနဲ. တဦးကိုတဦး နားလည်ပြီ: အပြန်အလှန် ကူညီရင်း၊ဖေးမရင်း၊သင်ပေးရင်း၊နားထောင်ရင်း၊မျှဝေရင်း၊ခံစားရင်း ရင်းနီးမူတွေ တည်ဆောက်ခဲ.ကြတယ်။
အရင်းနီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကျတော. အရာအားလုံး မဟုတ်တောင်အားလုံးနီးပါး ဖလှယ်ကြတယ်။တယောက်စိတ်ကို တယောက် နားလည်တယ်။ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်။ ကူညီဖို. အဆင်သင်.ရှိနေပြီ: တနယ်စီဝေးနေပေမယ်. စိတ်ထဲ နီးနေကြတယ်။
သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေထဲမှာ ရိုးသားသူ၊ ခင်မင်ဖို.ကောင်းပြီ: ကူညီတတ်တယ်.သူ၊ သူများကို ဒုတ်ခမပေးတတ်သလို ခင်မင်ဖို. မကောင်းတယ်.သူ၊ အားမနာတတ်သူ၊ အနိုင်ကျင့်သူ၊ အသံကျယ်ကျယ်နဲ. ကြွားဝါတတ်သူ၊ မပြည်.တယ်.အိုး ဘောင်ဘင်ခတ်သူ၊ စကားများပေမယ်. နားထောင်ကောင်းအောင် ပြောတတ်တယ်.သူ၊ ဘယ်ဘဝရေစက်မှန်:မသိ အသံကြားရုံနဲ. အမြင်ကတ်စရာ ကောင်တယ်.သူ၊ လောဘကြီ:သူ၊ စည်:ကမ်:ရှိသူ၊ ရှပ်ပြာရှပ်ပြာ နိုင်သူ၊ ဟန်လုပ်တတ်သူ၊ ပြင်ဆင်တတ်သူ အို စုံနေတာပါပဲ။
စိတ်တိုတတ်တယ်.စန်:ထွန်းကို စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်အောင် ၊လူပါးဝတတ်အောင်၊ ရန်စွာတတ်အောင် သင်ပေးတယ်.သူ ရှိသလို တွေ့ကြုံရသမျှ သူတွေထဲက ကောင်းတယ်.အကျင့်တွေကိုလည်: သင်ယူရပြန်တယ်။
လူတယောက်မှာ ကိုယ်.စိတ်ကို ကိုယ်ကိုတိုင်ထက် ပတ်ဝန်:ကျင်က စိတ်ပင်ပန်းမူ ပေးတာ များပါတယ်။ အဝေးမှာ နေတယ်.သူထက် ကိုယ်.အနီးအနားမှာ ရှိနေတယ်.သူကပဲ ကိုယ်.ကို အများဆုံး စိတ်ဒုတ်ခ ပေးနိုင်တာပါ။တခါတလေ သူတို.နဲ. အဝေးကို ထွက်သွားချင်မိပေမယ်. သူတို. မရှိလို့ကလည်: မဖြစ်ပြန်ဘူး။ပူလောင်တဲ.သူရဲ. အနားမှာ နေရရင် အပူဟတ်တာပါပဲ။
တခါတလေမှာတော.လည်: တကိုယ်ကောင်း ဆန်တယ်.သူ၊ မိသားစုကို သံယောဇဉ် မတွယ်တဲ. သူ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို ဘာမှ လှည်.မကြည်.ဘဲ လုပ်တဲ.သူ၊ သမီ:ဆိုး၊ ညီမဆိုး၊ အမဆိုးဆိုးလေး ဖြစ်ချင်မိတယ်။
ငယ်ငယ်ကဆို ခေါင်းချတာနဲ. အိပ်ပျော်တာ တရေးဆိုတမောပဲ။ ဆင်အော်တာတောင် နိုးမှာ မဟုတ်ဘူး ။ အသက်ကကြီးလာ၊ အလုပ်ထဲမှာ အဆင်မပြေ၊ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရတယ်.သူတွေနဲ. အဆင်မပြေရင် အိပ်မပျော်တော.ပြန်ဘူး။ အိပ်ပျော်ဖို.အချိန် အတော်ယူသလို နိုးရင်လည်: ပြန်အိပ်ပျော်ဖို.အချိန်အတော်ယူပြန်တယ်။ စိတ်ပင်ပန်:မူများရင်၊ အိပ်မပျော်ရင်၊ ပင်ပန်:ရင် စန်:ထွန်းအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းက Jogging ပြေးတာပါပဲ။ နားလိုက် မနှေးမမြန်လေး ပြေးနေရတယ်.အချိန်မှာ လွတ်လပ်ခြင်းအရသာကို ခံစားရတယ်။ Singaporeလို အားကစား လိုက်စာ:တယ်.နိုင်ငံမှာတော. နေရာတကာ အားကစား လုပ်နေတယ်.သူတွေကို တွေ့နိုင်သလို ဘယ်သူ့ကိုမှလည်: ဂရုစိုက်စရာမလို။ စိတ်ပင်ပန်:မူတွေများရင် Joggingပြေးတာဟာ စိတ်ပင်ပန်:မူတွေကို လျှော့စေတယ်.နည်းပါပဲ။